भेरी नगरपालिकालाई देशकै नम्बर एक नगरपालिका बनाउँछु – Vision Khabar
। ११ पुष २०७४, मंगलवार ११:३० मा प्रकाशित
काठमाडौं । अखिलको विद्यार्थीबाट राजनीति सुरु गरी विद्यार्थीको केन्द्रीय सदस्य हुदै सचिवालय सदस्य र विदेश विभागको प्रमुख भएका चन्द्रप्रकाश घर्ती दुर्गम जिल्ला जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुखको कार्यभार सम्हालेका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा चार हजार २ सय ९२ मत ल्याएर घर्ती नगरको प्रमुख भएका हुन् । ३५ वर्षीय घर्तीको अनुहार विजयपछि उज्यालो भएको छ, त्यति नै मनमा अबको ५ वर्षमा जनताले दिएको मतको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता देखिन्छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवनिर्वाचत मेयर हुन् घर्ती मगर । नेकपा एमालेबाट मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका युवा नेता मगरले चुनाव सहजै जिते । जाजरकोट–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चमा रहेर जाजरकोटका जनतासँग भिजेका घर्तीले विकासमा धेरै पछाडि परेको भेरी नगरपालिकामा धेरै चुनौती रहेको बताएका छन् । खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, बिजुली आदि प्रमुख समस्या हुन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन । किनभने जाजरकोटका जनताको चेतनाको स्तर पनि धेरै तल छ । मानव विकास सूचकांकमा पनि जाजरकोट पछाडि छ । ७५ जिल्ला मध्ये विकासमा जाजरकोटको स्थान ६८ औं हो । दूर्गम जिल्लाको नगरपालिकामा निर्र्वािचत भएका मेयर घर्तीसँग जनसवालले गरेको कुराकानी हामिले प्रतुत गरेका छौ ।
चुनावमा बिजयी भएर भेरी नगरपालिकाको प्रमुख बन्नुभयो, कस्तो रह्यो चुनावी अनुभव ?
चुनाव साँच्चै एउटा महत्वपूर्ण अनुभव हुँदोरहेछ । अहिले चुनाव जितिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने युवा भएरमात्र नभई आफूलाई र आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गरेर जनताले मलाई जिताए । माओवादीको बाहुल्यता मानिएको जाजरकोटमा एमालेले चुनाव जित्नु सहज थिएन । चुनाव जित्न जति असहज थियो त्यति नै असहज थियो पार्टीबाट टिकट पाउन । तर मलाई पार्टीले विश्वास ग¥र्यो र टिकट दियो । मैले टिकट पाएपछि मात्र होइन, पहिला नै गाउँघर र टोलटोलमा राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा काम गरेको थिए । त्यहि काम गरेको कारण अहिले चुनाव जित्न सहज भएको हो । अखिलको राजनीति गर्दा आन्तरिक चुनाव धेरै लडेको अनुभव छ । तर संसदीय चुनावको भने यो पहिलो अनुभव थियो । यो संसदीय राजनीतिमा चुनाव लड्न धेरै समस्या हुँदो रहेछ । हामी कम्युनिष्टहरुकालागि त यो फलामको चिउरा नै रहेछ । जबसम्म आममतदाता शिक्षित हुदैनन, तबसम्म यो संसदीय चुनाव सबैकालागि सहज हुन सक्दैन । धेरै खर्चिलो र भड्किलो छ । यसलाई अहिलेबाट नै सुधार्नु पर्छ । आफूले मत माग्न भन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या बढी आउने रहेछ । अहिले चुनावलाई कयौले फेशनको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । चुनाव भनेको समाज, देश र नागरिकको भाग्य र भविश्यसंग गाँसिएको कुरा हो भन्ने जबसम्म आम मतदातालाई आत्मादेखि नै महशुस हँुदैन तवसम्म यो चुनाव उम्मेदारको मात्र हुनेछ ।
जितपछि कस्तो जिम्मेवारी थपियो ? कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
चुनाव जितेपछि जिम्मेवारी थपिएको मात्र होइन । जिम्मेवारी पूरा गर्ने जिम्मा पनि आफूमा आएको छ । जाजरकोटको सदरमुकाममा रहेको नगरपालिका भएपनि यहाँका समस्या धेरै छन् । तर, म समस्या मात्र गनेर बसेको छैन । ती समस्या समाधान गर्ने खाका पनि कोरेर बसेको छु । यो पाँच वर्षमा भेरी नगरपालिकाका समस्याहरुलाई विभिन्न भागमा बाँडेर त्यसको समाधान गर्ने योजना बुनेको छु । म सुरुमा नै यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दिन । मैले चुनावको समयमा मतदाताहरुसँग केहि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु । त्यो पूरा गर्छु । यसको लागि दुई किसिमले काम गर्ने योजना छ । पहिले तत्काल पूरा गर्नुंपर्ने काम हो– खानेपानीको समस्या । बजार क्षेत्रमा पानीको समस्या छ । अन्य वडाहरुमा पनि समस्या छन् । यस्तै, विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन अहिलेसम्म सदरमुकाममा पनि जोडिएको छैन । यसकालागि काम सुरु भइसकेको छ । साना जलविद्युत आयोजना भएपनि सदरमुकाममा सधैं विजुलीको समस्या हुन्छ । यो समस्या छिटै हल गर्ने योजना छ ।
तपाईको आँखामा कस्तो छ जाजरकोट ?
म सधैं जाजरकोटको तस्वीर आँखामा बोकेर हिड्छु । चुनाव जितेपछि कयौं रात सुत्न सकेको छैन । सधैं नगरपालिकालाई कसरी राम्रो बनाउनेमात्र सोंच्छु । कसरी त्यहाँका आम नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा सर्वसुलभ रुपमा दिने भनेर विभिन्न योजना बनाउँछु । आफ्नो नगरपालिकामा यातायातको असुृविधा छ । यो काम पनि आफूले युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताउँछन् । सडक संजालले छोएको छ । तर पनि भेरी नगरपालिकाका हरेक वडामा सडक सञ्जालले नछोएकाले त्यो काम पूरा गर्ने योजना बुनेका छन् । भेरी नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य अर्को समस्या हो । नगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष महत्वका साथ नयाँ योजना ल्याउने मेरोे सोँचाइ छ । जाजरकोटमा अहिलेसम्म जुन रुपमा शिक्षाको विकास र स्वास्थ्यको विकास भएको छ त्यो अपुग छ । जिल्लामा रहेको एउटा अस्पताल भेरी नगरपालिकामा नै पर्छ । यसको स्तर हेर्ने हो भने एउटा विमारीको उपचार गर्न आएको विमारी अर्को विमारी बोकेर घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यो अस्पतालाई भौतिक पूर्वाधार र आधुनिक मेशिनहरुसहितको अस्पताल बनाउने योजना छ । अस्पतालमा डाक्टरको दरबन्दी त छ तर डाक्टर नभएकाले तुरुन्त यसको ब्यवस्था गर्ने उनको योजना छ । धेरै नागरिकले अज्ञात रोगका कारण ज्यान गुमाउने जिल्ला हो, जाजरकोट । अब औषधि उपचार नपाएर कसैले ज्यान गुमाउनु नपर्ने गरी स्वास्थ्यमा काम गर्ने उनको योजना छ । शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्नु पहिलो काम हो । भएका सामुदायिक स्कुलहरुको स्तरउन्नति गर्न शिक्षामन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर जान्छु । प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ । यसका लागि पहल गर्छु । जिल्लाको लागि नै हुने गरी एउटा प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यालय खोल्ने पनि उनको योजना छ ।
जिल्लामा कस्तो छ समृद्धिको सम्भावना ?
जिल्लालाई र जिल्लाका जनतालाई समृद्ध बनाउने धेरै सम्भावनाहरु छन् । कृषिमा आधुनिकिकरण नगरेर अब सुख्खै्र छैन । यो समयमा पनि हामीहरु जिवन निर्वाहमुखि कुषिमा अल्झेर बस्यौ भने अगाडि बढ्नै सक्दैनौं । ‘भेरी नगरपालिकालाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने काम अगाडि बढाउछु । यसका लागि आधुनिक कृषि सामग्री,मल बिउविजन, सिंचाइको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसको लागि मेरो पहिलो प्राथमिकता रहने छ । कृषिलाई आधुनिकीकरणको साथै तरकारी खेति, फलफूल खेतिमा पनि त्यहाँका मान्छेहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यसकालागि पनि नगरपालिकामा पूर्वाधारहरु बनाउनु पर्छ । भेरी नगरपालिकामा पर्यटनको संभावना छैन । तरपनि केहि धार्मिकस्थलहरु छन् । यिनलाई आन्तरिक पर्यटकीयस्थल बनाउन सक्ने सम्भावना छ । जाजरकोटी राजाको पुरानो दरबारको भग्नावेश छ । यसलाई पनि पर्यटकियस्थल बनाउन सकिन्छ । मालिका र कालिका मन्दिर छन् । यो मन्दिर जिल्लामा प्रसिद्ध छ । यसमा केवलकारको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । जिल्ला सदरमुकाम भेरी नदीको किनारमा छ । यसमा हाइड्रोपावर बनाउन सकिन्छ । यो बनाउनलाई नगरपालिका मात्र होइन पुरा जिल्ला र अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर जान सकिन्छ ।
जाजरकोटको सदरमुकामको नगरपालिका भएपनि धेरै समस्या छन् । तर म हार मान्दिन । देशको नम्बर एक नगरपालिका बनाउने मेरो सपना पूरा गर्नेछु । जिल्ला सदरमुकाम खलंगाका लागि निर्माण हुन लागेको बृहत खानेपानी आयोजना आगामी दुई बर्षमा सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउन निर्माण कम्पनीले खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालय, जाजरकोटसंग सम्झौता गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य दुई बर्षमा पुरा हुन्छ । जाजरकोट, खलंगा सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण कार्य १२ करोड ३३ लाखमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले २०७६ साल असार २६ गते भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । जाजरकोट, खलंगा सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई बर्ष भित्रै सम्पन्न हुने भएपछि सदरमुकामबासी खुशी भएका छन् । आयोजनालाई दीगो र पर्यााप्त बनाउनका लागि जाजरकोट, खलंगा सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले भेरी नगरपालीकाको साझेदारीमा उप आयोजना सञ्चालन गरेको छ । गाराङसीको चोरढुङ्गा खोलाको मुहानलाई पोखराको ओखरेनी पानी मुहानमा मिसाईएको छ । दुई खोलामा रहेका सबै पानीका मुहानहरुलाई आयोजनाले उपयोग गर्न सकेमा ५० बर्ष भन्दा बढीका लागि सदरमुकाम खलंगाका लागी खानेपानी पर्याप्त हुन्छ ।
मेरो एकमात्र सपना भनेको जाजरकोटको समृद्धि, जनताको जीवनस्तरमा सुधार र विकास हो । यसमा लागि मैले र मेरो शक्तिले भ्याएसम्म आवश्यक मा गर्नेछु । हामी सबैले मिलेर काम गर्दै जाँदा अवश्य पनि सफल भइन्छ भन्ने मेरो सोच हो । यसमा सबैले योगदान गर्नुपर्छ । गाउँ, शहर, क्षेत्र गर्दै नै देश विकास हुने हो । सबैलाई धन्यबाद ।